- Guud ahaan $410.737 billion (43rd)
Israaiil (Af-Hebrow: יִשְׂרָאֵל‎, Yisra'el; Af-Carabi: إِسْرَائِيلُ‎, Isrā'īl) waa Dowlad isku sheeg Gumeesta ah, oo ku taala, Bariga Dhexe ee dhulka carabta. Israaiil waxee xuduud la leedahay wadamada Lubnaan, Urdun, Masar, Suuriya, iyo Daanta galbeed, Marinka Gaza oo isku hal wadan ah. Dhulka maanta galbeedku eey u yaqaanaan israaiil, waxaa markeeda hore loo yaqaanay falastiin, waxa dhulkaa lahaa walina leh falastiin, waxaana la abaabulay 1948ii. Carabta- sidoo kale iyo inbadan oo dalalka Islaamka ah kamid ah-, iyo Ururka argagixisada ah oo loo yaqaano Zionism, ee gumeesta Falastiin, waxaa ka soo dhaxeeyay dagaalo aad u dheer oo ilaa maanta ee colaad dhaxtaagantahay.Israaiil waxee isku balaarisay dhulka falastiin markii ee carabta ka diideen qaramada midoobay in ee yahuuda daris la noqdaan.60sano kadib dhulka falastiin waxaa la kala dhahaa Marinka Gaza iyo daanta galbeed. Sida ururkaan uu sheegto, Caasimadoodu waa galbeedka Qudus, caasimadooda labaadna waxaa la dhahaa Tel Aviv. Sanadkii 1947, Qaramada Midoobay waxay ogolaatay Qorshe Iskudhin ah oo Falastiin ku talinaysa in la abuuro dalal madaxbannaan oo ka madaxbannaan Carabta iyo Yuhuuda iyo Yeruusaalem oo caalami ah. Qorshaha waxaa aqbalay hay'adda Yuhuudda, oo ay diideen hoggaamiyeyaasha Carbeed. Sanadka soo socda, hay'adda Yuhuuddu waxay ku dhawaaqday inay madaxbannaan tahay dalka Israel, iyo 1948dii dagaalkii Carabta ee Israa'iil ka dib markii uu Israel ka abuuray dhismihii hore ee mandiqadda hore, halka Bankiga Galbeedka iyo Gaza ay qabsadeen dalalka jaarka ah. Israa'iil waxay tan iyo markii ay la dagaallantay wadamada Carabta, waxaana ay tan iyo 1967-dii qabsadeen dhulal ay ka mid yihiin Bankiga Galbeedka, Golan Heights iyo Gaza Strip (wali waxaa loo tixgeliyaa in la qabsaday ka dib markii laga reebay 2005, inkastoo qaar ka mid ah khubarada sharcigu ay khilaafaan sheegashadan). Waxay sharciyaddeeda u ballaarisay Golan Dhulbahante iyo Bariga Yeruusaalem, laakiin maaha Bankiga Galbeedka. Falalka reer Israa'iil ee Falastiiniyiinta waa hawlaha ugu cimriga adduunka ee wakhtiyada casriga ah. Dadaalka lagu xalinayo iskahorimaadka Falastiiniyiinta iyo Falastiiniyiinta ma aysan dhicin heshiis nabadeed. Si kastaba ha ahaatee, heshiisyada nabadda ee u dhexeeya Israel iyo labada Masar iyo Jordan ayaa la saxiixay.
Waddnamha deggan israel[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Arab League 2, 560,000+
Ethiopia 10, 000+
United States 4,000+
Qawaaniintiisa aasaasiga ah, Israel ayaa isu muujinaysa sida Yuhuudda iyo dimuqraadiyadda. Israel waa dimuqraadiyad wakiil ah nidaamka baarlamaanku, wakiilnimada saami iyo codbixinta caalamiga ah Ra'iisul wasaaraha waa madaxa dawladda, Knesset waa sharci dejinta. Israel waa waddan horumarsan iyo xubin ka mid ah OECD, oo leh dhaqaalaha 33-ka ugu weyn adduunka adigoo soo saarey wax soo saarka gudaha ee sannadka 2018. Dalka ayaa ka faa'iideysanaya shaqaale xirfad sare leh wuxuuna ka mid yahay dalalka ugu aqoonta badan dunida mid ka mid ah boqolleyda ugu badan ee muwaadiniinta haysta shahaadada waxbarashada heerka jaamacadeed. Israel waxay leedahay heerka ugu sarreeya ee ku nool Bariga Dhexe, waxayna leedahay mid ka mid ah rajooyinka nolosha ee ugu weyn adduunka.
Linkiga Cadaymaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
↑ Monthly Bulletin of Statistics for Population, August 2013 Israel Central Bureau of Statistics
↑ The 2008 Israel Integrated Census of Population and Housing, Israel Central Bureau of Statistics 28 December 2008
↑ Report for Selected Countries and Subjects, October 2013, International Monetary Fund
↑ Distribution of family income – Gini index, The World Factbook, Central Intelligence Agency, September 1, 2009
↑ 2013 Human Development Index and its components – Statistics, United Nations Development Programme 2013
↑ Central Bureau of Statistics Introduction to the Tables: Geophysical Characteristics
↑ Localities and Population, by Population Group, District, Sub-District and Natural Region 6 September 2017 Israel Central Bureau of Statistics
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Israaiil&oldid=233992"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Abriil 2022, marka ee eheed 07:55.